Ogaden News Agency (ONA) – Dawlada Mali oo Dib U Celisay Dad Laga Soo Masaafuriyay Wadanka Faransiiska.
Dawlada Mali oo Dib U Celisay Dad Laga Soo Masaafuriyay Wadanka Faransiiska.
Dawlada Mali ayaa dib ugu celisay laba qof oo laga soo musaafuriyey wadanka Faransiiska diyaaradii siday markii ay ka soo degeen, iyadoo su’aalo ka keentay in xitaa dadkaasi yihiin muwaadiniin Mali u dhalatay.
Dowlada Mali waxay sheegtay in labada qof loo soo duuliyey magaalada Bamako iyadoo la adeegsanayo waraaqaha safarka ee Yurub ee loo yaqaan “laissez-passez” balse aannay jirin Baasabooro ama waraaqo kale oo Mali la xidhiidha. Xukuumadda Mali waxay sheegtay in aanay aqbali doonin dadka “si fudud loogu qaato inay yihiin Mali”.
Warar dhawaan soo baxay oo ku aadan jiritaanka heshiis midowga Yurub qayb ka yahay oo sheegaya in dadka Mali u dhashay ee ku guuldaraysta codsigooda magangalyo doonka ah dib loo celiyo ayaa dhaliyey dhaleecayn xoogan. War-Saxaafadeed ka soo baxay dowlada Mali ayaa lagu cambaareeyey in loo adeegsado waraaqaha Yurub ee “laissez-passez” xaaladdaha masaafuriska taas oo lagu tilmaamay “inay ka soo horjeedo heshiiska caalamiga ah”.
Waxaa kaloo loogu digay diyaaradaha in aanay ogolaan in dadka adeegsanaya dukumintiga caynkaas ah aanay u soo qaadin wadanka Mali. Faransiiska ayaan wali ka hadlin arintan. Waxaa dalka Faransiiska ku nool bulsho ka soo jeedo Mali, iyadoo Faransiisku dalkaasi guumaysan jiray, waxaana dadkaasi ay lacagto dib ugu diraan ehelkooda.
In ka badan 360,000 kun ayaa soo gaadhay Qaarada Yurub iyagoo ka soo gudbaya badda Mediterranean sanadkan, badankoodu waxay ka soo mareen dalka Mali inkastoo dadka u dhashay Mali aanay ka mid ahayn dadka haysta 10-ka dhalasho ee isku dayaay safarkaas.
Midowga Yurub ayaa taageeray qorshe dhaqaale oo gaaraya $1.9bn oo lagu joojinayo tahriibayaasha Afrika kaasi oo lagu dhawaaqay bishii November ee sanadkii 2015, iyadoo hogaamiyeyaasha Afrika ay aqbaleen in dadka codsigooda magangalyo doon ah ee la diido la soo celiyo lagu badasho horumarin dhaqaale.